Elementary OS 0.2 Luna ကိုသွင်းပြီးတဲ့အခါဘာလုပ်ရမလဲ Linux မှ
Elementary OS 0.2 Luna ကိုသွင်းပြီးနောက်ဘာလုပ်ရမလဲ
IvanLinux | | အသွင်အပြင် / ကိုယ်ပိုင်
ကျွန်ုပ်၏ပထမ ဦး ဆုံးပို့စ်သည်အလွန်လက်ခံမှုရှိကြောင်းတွေ့ရသည်။ ကျွန်ုပ်သည်အသုံးဝင်သောအရာများနှင့်ရံဖန်ရံခါရယ်စရာကောင်းသောပို့စ်များကိုဆက်လက်တင်ရန်ကြိုးစားမည်။ နောက်ကျသွားပြီကိုငါသိသော်လည်း Elementary OS အတွက်အကြံဥာဏ်များအချို့ပေးသည်။
5 5. ချုံ့ applications များ Install လုပ်ပါ
6 6. အခြားအထုပ်နှင့် configuration မန်နေဂျာ Install လုပ်ပါ
7 ၇။ ဆော့ဝဲလ်စင်တာတွင်လျှောက်လွှာများကိုရှာပါ
8 8 ။ personalization
ဒါဟာလွတ်လာပြီးနောက်ကြောင်းဖွယ်ရှိသည် မူလတန်း OS Luna Elementary အဖွဲ့မှဖြန့်ဝေပေးသော ISO image နှင့်အတူပါ ၀ င်သောကွဲပြားသော package များအတွက် updates အသစ်များထွက်ပေါ်လာပါပြီ။
ဤအကြောင်းကြောင့်, installation ပြီးပါကအမြဲတမ်း run ရန်အကြံပြုသည် Update Manager သို့မဟုတ် terminal မှအောက်ပါကို run ခြင်းအားဖြင့်:
ဝင်ရောက်ခွင့် ဘာသာစကားပံ့ပိုးမှု System Settings မှ၎င်း၊ ထိုနေရာမှသင်နှစ်သက်သောဘာသာစကားကိုထည့်သွင်းနိုင်လိမ့်မည်။
ဥပဒေရေးရာပြissuesနာများကြောင့် Elementary OS သည်ပုံမှန်အားဖြင့်မည်သည့်အသုံးပြုသူမဆိုအလွန်တရာလိုအပ်သော packets များမပါ ၀ င်နိုင်ပါ။ codecs သည် MP3၊ WMV သို့မဟုတ် encrypted DVDs များဖွင့်ရန်၊ Windows တွင်ကျယ်ပြန့်စွာသုံးသောဖောင့်များ၊ စီးပွားဖြစ်ယာဉ်မောင်းများ (3D လုပ်ဆောင်ချက်များကိုပိုမိုကောင်းမွန်အောင်သုံးခြင်း (သို့) ဝိုင်ဖိုင်) ။
ကံကောင်းထောက်မစွာ, Elementary OS တပ်ဆင်သူသည်ဤအရာအားလုံးကိုခြစ်ရာမှစတင်ရန်သင့်အားခွင့်ပြုသည်။ Installer ဖန်သားပြင်များထဲမှတစ်ခုကိုသာသင် enable လုပ်ရန်လိုအပ်သည်။
အကယ်၍ သင်မရှိသေးပါက၊ သူတို့ကိုအောက်ပါအတိုင်းတပ်ဆင်နိုင်သည် -
Ubuntu သည် 3D driver ရရှိနိုင်မှုကိုအလိုအလျောက်သိရှိပြီးသတိပေးသင့်သည်။ အဲဒီလိုဆိုရင်၊ အပေါ်က panel မှာ video card အတွက် icon တစ်ခုတွေ့ရလိမ့်မယ်။ ထိုအိုင်ကွန်ပေါ်တွင်ကလစ် နှိပ်၍ ညွှန်ကြားချက်များကိုလိုက်နာပါ။
Ubuntu ကသင်၏ကဒ်ကိုမတွေ့ရှိပါက Hardware Configuration Tool ကိုရှာဖွေခြင်းအားဖြင့်သင်၏ 3D driver (nvidia or ati) ကိုအမြဲတပ်ဆင်နိုင်သည်။
ATI ကဒ်များအတွက်ယာဉ်မောင်းများပါသည့် PPA
ကျွန်ုပ်သည်တရားဝင် repositories တွင်ပါသော package များကိုပိုမိုနှစ်သက်သည်။ သို့သော် အကယ်၍ သင်ကနောက်ဆုံးပေါ် ATI driver များကိုအသုံးပြုလိုလျှင်:
အဟောင်း ATI ကတ်များနှင့်အတူပြProbleနာများ
အချို့သော ATI ဂရပ်ဖစ်ကဒ်များသည် ATI ၏ "legacy" driver များကို အသုံးပြု၍ X server ကိုအဆင့်မြှင့်တင်ခြင်း မှလွဲ၍ Elementary OS နှင့်အလုပ်မလုပ်ပါ။ လိုအပ်ပါက Elementary OS သည်ဘာကြောင့်စနစ်တကျ boot မတက်သည်ကိုသင်လျင်မြန်စွာရှာဖွေလိမ့်မည်။ ၎င်းကိုဖြေရှင်းရန်အောက်ပါ Command များကိုအသုံးပြုပါ။
nVidia ကဒ်များအတွက်ယာဉ်မောင်းများပါသည့် PPA
ကျွန်ုပ်အကြံပြုသည်မဟုတ်သော်လည်းသင်၏ဂရပ်ဖစ်ကဒ်အတွက်ဒရိုင်ဘာများကိုတပ်ဆင်ရန် Hardware Configuration Tool ကိုအသုံးပြုခြင်းအပြင်ဤရည်ရွယ်ချက်များအတွက်ဖန်တီးထားသော PPA မှတဆင့်ထိုဒရိုင်ဘာများ၏ beta ဗားရှင်းကိုတပ်ဆင်နိုင်သည်။
အကယ်၍ သင်သည် MP3၊ M4A နှင့်အခြားစီးပွားဖြစ်ပုံစံများကိုမနားထောင်ဘဲအသက်ရှင်။ မရနိုင်သောသူများအနက်မှတစ် ဦး ဖြစ်ပါကသင်၏ MP4, WMV နှင့်အခြားစီးပွားဖြစ်ပုံစံများဖြင့်သင်၏ဗွီဒီယိုများကိုမဖွင့်နိုင်ခြင်းမရှိဘဲဤရက်စက်ကြမ်းကြုတ်သောကမ္ဘာတွင်ရှင်သန်နိုင်ခြင်းမရှိလျှင်၊ အလွန်ရိုးရှင်းသောဖြေရှင်းချက်ရှိသည်။
စာဝှက်ထားသော DVD အထောက်အပံ့ ("မူရင်း" အားလုံး) ကိုထည့်ရန် terminal ကိုဖွင့်ပြီး၊
GetDeb (ယခင် Ubuntu ကလစ်နှိပ်ပြီးဖွင့်သည်) သည် ၀ က်ဘ်ဆိုက်ဖြစ်ပြီး Deb packages များနှင့်ပုံမှန် repositories တွင်မပါရှိသောလက်ရှိဗားရှင်းများကိုထုတ်လုပ်ပြီးနောက်ဆုံးအသုံးပြုသူထံသို့ရရှိစေရန်ပြုလုပ်သည်။
Ubuntu / Elemntary OS အတွက်ဂိမ်းသိုလှောင်ရေး Playdeb ကို getdeb.net ကိုပေးသူများမှဖန်တီးခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ စီမံကိန်း၏ရည်ရွယ်ချက်မှာ Ubuntu အသုံးပြုသူများအားနောက်ဆုံးပေါ်ဗားရှင်းများနှင့်တရား ၀ င်တရားဝင်မဟုတ်သောသိုလှောင်မှုကိုထောက်ပံ့ပေးရန်ဖြစ်သည်။
5. ချုံ့ applications များ Install လုပ်ပါ
sudo apt-get install un rar p7zip-full p7zip-rar sharutils mpack lha arj
6. အခြားအထုပ်နှင့် configuration မန်နေဂျာ Install လုပ်ပါ
ထည့်သွင်းတပ်ဆင်ခြင်း - ရှာဖွေရေးဆော့ဝဲလ်ဌာန: Synaptic ။ မဟုတ်ရင် Terminal မှာအောက်ပါ command ကိုရိုက်ထည့်နိုင်သည်။
sudo apt-get ကို Synaptic ထည့်သွင်းပါ
"apt-get" command ကိုအစဉ်အမြဲသုံးနိုင်သောကြောင့်၎င်းသည်မလိုအပ်ပါ။
sudo apt-get install aptitude ကိုသုံးပါ
ထည့်သွင်းတပ်ဆင်ခြင်း - ဆော့ဝဲစင်တာတွင်ရှာဖွေပါ - gdebi ။ မဟုတ်ရင် Terminal မှာအောက်ပါ command ကိုရိုက်ထည့်နိုင်သည်။
တပ်ဆင်ခြင်း - ရှာဖွေရေးဆော့ဝဲလ်ဌာန: dconf editor ။ မဟုတ်ရင် Terminal မှာအောက်ပါ command ကိုရိုက်ထည့်နိုင်သည်။
sudo apt-get dconf-tools ကို install လုပ်ပါ
သင်အလိုရှိသည့်အရာကိုလုပ်ရန်အပလီကေးရှင်းကိုရှာမတွေ့နိုင်ပါက (သို့) ပုံမှန်အားဖြင့်လျှောက်ထားခြင်းကိုမကြိုက်ပါကဆော့ဝဲစင်တာကိုသွားနိုင်သည်။
Firefox ကိုဝက်ဘ်ဘရောက်ဇာ (ခရိုမီယမ်သို့မဟုတ်ဂူဂဲလ်ခရုမ်းကိုကျွန်ုပ်မထောက်ခံပါ)
LibreOffice, Office suite (MS Office ရှိသော်လည်းအခမဲ့ဖြစ်သည်)
8 ။ personalization
အဆိုပါမူလတန်း Update ကိုအဝန်း PPA ထည့်ပါ
အတိုချုပ်ပြောရမယ်ဆိုရင် Elementary Tweaks ဆိုတာသင်ဟာ Elementary ကိုအများဆုံးစိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်နိူင်သည်
အလွန်အသုံးဝင်သော launcher! Install လုပ်ပါ။ သင်နောင်တမရပါ😉
ခေါင်းစဉ်များ၊ သင်္ကေတများထည့်သွင်းခြင်း ...
အဆင့်မြင့်စိတ်ကြိုက်ပြုပြင်ခြင်း၊ ဂျယ်လီကဲ့သို့သော ၀ င်းဒိုးအကျိုးသက်ရောက်မှု
သင်လိုချင်လျှင်ဤအရာကိုကျော်။ အနည်းငယ်ထပ်မံစမ်းသပ်။ ပြုလုပ်နိုင်သည်
XFCE4 ကို Install လုပ်ပါ။
ထည့်သွင်းပြီးပြီဆိုရင် session ကိုပိတ်ပြီး nut ကိုနှိပ်ပါ။ Xfce Session ကိုရွေးပြီးစတင်ပါ။
ကျွန်ုပ်တို့သည်မူလချိန်ညှိချက်များမှစတင်သည် (Pantheon အနည်းငယ်နှင့် xfce xD ကိုရပ်ပါ)
ယခုကျွန်ုပ်တို့သည် kwin ကိုသွင်းသည်။
အကယ်၍ သင်လိုချင်လျှင် Dolphin နှင့် Ark ကိုထည့်သွင်းနိုင်သည် (ထောက်ခံအကြံပြု):
Application နှင့် Autostart tab တွင် Configuration နှင့် Configuration ကို Session နှင့် Startup သို့ထည့်ပါ
ထို့အပြင်အောက်ပါ application များကိုကျွန်ုပ်တို့ထည့်ပါ။
ကျွန်ုပ်တို့သည် panel များကိုဖုံးကွယ်ထားသည်။
သောငါ၏သတ္တိ that's ခဲ့ပုံပါပဲ
CPU: Intel® Atom ™ CPU N570 @ 1.66GHz × 4
GPU - Intel Corporation Atom ပရိုဆက်ဆာ D4xx / D5xx / N4xx / N5xx ပေါင်းစည်းထားသောဂရပ်ဖစ် Controller (rev 02)
HDD: 250 GB အထိ
မော်ဒယ်: Aspire One 257
ရမ်: 1024 ကို MB
မူလတန်းအတွက်သိကောင်းစရာများ - http://www.elementaryupdate.com/ (အင်္ဂလိပ်)
သင်ကြိုက်နှစ်သက်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်၊ ကျွန်ုပ်သည် twitter ၌ကျွန်ုပ်နောက်လိုက်ရန်မမေ့ပါနှင့်, မှတ်ချက်ပေးပြီး xD ကိုရယူပါ...
ဒီမှာထည့်ပါနှင့်ငါ့ post ကိုအဆင့်သတ်မှတ်ရန်: http://strawpoll.me/703848
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » အသွင်အပြင် / ကိုယ်ပိုင် » Elementary OS 0.2 Luna ကိုသွင်းပြီးနောက်ဘာလုပ်ရမလဲ
86 မှတ်ချက်များ, သင့်စွန့်ခွာ
ဘာကြောင့် Ubuntu 12.04 ကို install လုပ်ပြီးတဲ့အခါဘာလုပ်မယ့် copy & paste တစ်ခုလိုထင်ရသလဲ?
ခေါင်းစဉ်သည်ကူးယူခြင်း (paste) တစ်ခုဖြစ်နိုင်သည်၊ သို့သော်အကြောင်းအရာသည်မဟုတ်ပါ။
ElementaryOS သည်ကောင်းသော distro တစ်ခုဖြစ်ပြီးအလွန်လျှင်မြန်သည်
ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ၎င်းသည်ညှိထားသော Ubuntu တစ်ခုမျှသာဖြစ်ပြီးအခြားအရာလည်းမရှိပါ။ : /
ငါသည်သင်တို့လုံးဝမှားသည်ကိုကြောက်ပါ၏၊ ယခင်က Ubuntu ကိုကျွန်တော်အသုံးပြုခဲ့သည် (စည်းလုံးမှု၏စိတ်ပျက်စရာပြီးနောက်၊ ဗားရှင်း ၁၂.၀၄ တွင်၎င်းကိုကျွန်တော် ဆက်၍ မသုံးခဲ့ပါ၊ သို့သော်ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုနှင့်လက်မထပ်ဘဲအခြားသူများကိုတပ်ဆင်ထားသည်) ထို့နောက်ကျွန်ုပ်သည်ရင်ဘတ်ကိုလျော့နည်းစွာအသုံးပြုခဲ့သည်။ စွမ်းဆောင်ရည်၊ အံ့အားသင့်စရာကောင်းတာကမတူညီတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာ Ubuntu ဟာအလွန်အမင်းနှေးကွေးနေတာပါ။ (unity မှာရှင်းရှင်းလင်းလင်းရထားတဲ့စည်းလုံးမှု) ။ eos ကို install လုပ်တဲ့အခါမှာအရမ်းတည်ငြိမ်ပြီးမြန်ဆန်တဲ့ပတ် ၀ န်းကျင်တစ်ခုရှိခဲ့တယ်။ Pantheon က gnome စည်းလုံးညီညွှတ်မှုနဲ့ kde al ထက်အများကြီးလှတယ်ဆိုတာကိုတော့မပြောပါဘူး။ အသုံးပြုသူ - ဖော်ရွေရိုးရှင်းထိန်းသိမ်းခြင်းစဉ်။
PearOS ကို Install လုပ်ပါ
သင် iCarly သို့မဟုတ်အခြား Dan Schnneider ထုတ်လုပ်မှုကိုနှစ်သက်ပါသလား။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့က Nick ကိုသူတို့တွေ့ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုပြပွဲတွေမှာပန်းသီးတွေကိုသစ်တော်သီးနဲ့အစားထိုးလို့ပဲ။
ပထမ ဦး ဆုံးအနေဖြင့် Elementary OS Luna ကိုစမ်းသပ်ပြီးဖြစ်သောကြောင့်ကျွန်ုပ်သည်အထင်ကြီးလေးစားမှုရှိသော်လည်း၎င်းကိုအခြေခံထားသည့်အရာကိုမြင်သောအခါငါထင်မြင်ချက်ကိုမပေးသော်လည်း iCarly (သို့) Dan ဆိုတာဘာလဲဆိုတာကိုမသိနိုင်ပါ။ အမှန်တကယ်တွင်ရည်ရွယ်ချက်ရှိသည်။ မှတ်ချက်တစ်ခုသာဖြစ်သည်။ ငါဖွင့်ပြီးအသုံးပြုရန်။ ထို့အပြင် Unity အနေဖြင့် Mac ၏မိတ္တူတစ်ခုဖြစ်ခြင်းနှင့်အရေခြုံဟန်ဆောင်ခြင်းမဖြစ်ခြင်းသည် Unity သည် Dock ကဲ့သို့ Mac ၏သဘောတရားများကိုကူးယူပါက၎င်းကိုဘယ်ဘက်တွင် ထား၍ ၎င်းကိုကောင်းစွာဖုံးကွယ်ထားသည့်အသွင်အပြင်ကိုပြောင်းလဲခြင်းအားဖြင့်ဖြစ်သည်။ မိမိကိုယ်ကို, etc, etc အကယ်၍ Elementary သည်ကျွန်ုပ်ကိုစွဲမှတ်စေလျှင်၊ Pear သည်ကျွန်ုပ်အဘို့တည်ထောင်ခြင်းနှင့် MacOSX အလုပ်လုပ်သည်နှင့်တိုက်ရိုက်အလုပ်လုပ်ခြင်းကြောင့် Mac သည်မဟုတ်ပါ၊ သို့သော်အသုံး ၀ င်မှုသည်အရေးကြီးသည်။ ဥပမာ OSX အားလုံးသည်ကောင်းမွန်သောဒီဇိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ Launchpad or expose ကဘာလဲဆိုတာငါမသိခဲ့ဘူး၊ ပုရကြောင့်ငါသိပြီ၊ သူတို့ဟာမရှိမဖြစ်အသုံးပြုရတယ်။ ငါ GUI အပြုအမူအတွက်ငါ့ကိုရှက်ကြောက်ခြင်းမရှိစေခြင်းငှါမပါဘဲ Linux ကိုableဝံဂေလိနိုင်မယ့် desktop ကိုမရှာခင်ကငါတွေ့ပြီ။
အခု Stallmantosos၊ ပွင့်လင်းတဲ့အရင်းအမြစ်ပြူရီတန်တွေ၊ trolls တွေစသည်ဖြင့်ကျွန်တော့်လည်ပင်းကိုထိုးနှက်နေတော့သည်။ စသည်တို့ ကောင်းပြီ၊ အနှောင့်အယှက်မပေးနဲ့၊ ငါပြန်ပြောမှာမဟုတ်ဘူး။ အကယ်၍ ဤပြူရီတန်များတွင်တစ်ခုခုမရှိလျှင်လွတ်လပ်မှုရှိသည်၊ ဝိရောဓိဖြစ်သော်လည်း၎င်းသည်မှန်သည်၊ ထို့နောက်အခြားသူများကိုသူတို့ကြိုက်နှစ်သက်ခြင်းမရှိသောအခါဝုန်းဒိုင်းကြဲခြင်း၊ Ubuntu ၏စီမံကိန်းများကိုလုပ်ဆောင်ခွင့်ပြုပါ။ နောက်ဆုံး Elementary သည် Pear, Libre Office နှင့် Open Office စသည်ဖြင့်ပူးပေါင်းပါကအကောင်းဆုံးဖြစ်လိမ့်မည်။ စသည်တို့ နှင့်ရှည်လျားသောစသည်တို့ကို "fork", "merge", "merge", "merge" အစား ...
ကောင်းပြီ၊ pearOS မတည်ရှိတော့ဘူး။
အိုကေတွင် eOS သည်အလွန်ခေတ်မမီတော့သောဆော့ဝဲလ်ရှိသည်။ သို့သော် Linux တွင်အဓိကပြproblemနာမဟုတ်ချေ။ အထူးသဖြင့် eos ကို install လုပ်သောအခါငါအမြဲတမ်းလုပ်သောအရာသည် kernel ကိုနောက်ဆုံးပေါ်ဗားရှင်းသို့မွမ်းမံသည်။ Ubuntu 12.04 LTS ကိုအခြေခံသည်။ ဗားရှင်းအသစ်များတပ်ဆင်ရန်မလိုဘဲအသစ်ပြောင်းခြင်းများကိုတင်ပြသောကြောင့်အလွန်ကောင်းပါသည်။
amd proprietary drivers များကိုမထည့်ပါနှင့်၊ သူတို့သည် gala နှင့်မှန်ကန်စွာအလုပ်မလုပ်ပါ၊
ကျွန်တော်တို့ရဲ့တစ်ချိန်ကဆိုပါတယ်အဖြစ် ချစ်သူ Stallman-
Brother stallman က nvidia XD အကြောင်းပိုကောင်းတဲ့အရာတွေကိုပြောပြလိမ့်မယ်
ငါ Leemote laptop မ ၀ ယ်နိုင်လို့ Intel chipset ကိုမှီခိုရလိမ့်မယ် (NVIDIA ကစျေးကြီးပြီးပရိုဆက်ဆာနဲ့ဂရပ်ဖစ်ပရိုဆက်ဆာဂရပ်ဖစ်တွေကနေအကျိုးအမြတ်အများဆုံးရချင်တယ်) ။
PS: Foxconn မဟုတ်ဘဲ Gigabyte board ကိုဝယ်ပါ။
Gigabyte, Asus (သို့) Asrock ။
ဒီသုံးခုကကျွန်တော့်ကိုဘယ်တော့မှမပျက်ကွက်ခဲ့ဘူး (AMD ပါတဲ့ဗိသုကာပုံစံများပင်) ။
Stallman လိုပဲ !!!!!!! ငါသူ့ကိုသတ်ပစ်ရန်ခိုင်လုံသောအကြောင်းပြချက်တစ်ခုရှိပြီးသား
အိုင်ဗင် Molina ဟုသူကပြောသည်
ဒါပေမယ့်မင်း Kwin ကိုသုံးနိုင်တယ်
Ivan Molina အားပြန်ပြောပါ
ငါဖျက်လိုသောသူမဖြစ်လိုသော်လည်းသင် Iceweasel ESR ကိုအသုံးပြုနေသလား။ ဗားရှင်း ၂၅ (ဖြန့်ချိဌာနခွဲ) သည်စွဲဆောင်မှုတစ်ခုနှင့်တူသည်။ ATI / AMD ဂရပ်ဖစ်ပစ္စည်းတွေနဲ့အတူငါ Windows XP ကိုသုံးနေတုန်းမှာ ATI ဗီဒီယိုကဒ်ပြတ်တောက်သွားတဲ့အချိန်မှာအမှတ်ရစရာတွေအများကြီးရှိတယ်။
KDE နဲ့နောက်ဆုံးတော့ငါစိတ်ရှုပ်စရာကောင်းတဲ့ desktop-hopping ကိုတွေ့ပြီ။ XFCE သည် KDE ကဲ့သို့အသုံး ၀ င်သော်လည်း Half-Life 1 ကစားခြင်းအတွက်အလုပ်မလုပ်သောဂရပ်ဖစ်ကတ်ပြားရှိသော PC များအတွက်သာ၎င်းကိုသုံးသည်။
နှင့်စကားမစပ်, သင့်ကိုယ်ပိုင် Elementary QT လုပ်ဖို့အချိန်ယူတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ငါ Elementary KDE လုပ်နိုင်မလားကြည့်ရအောင်။
သင့်ရဲ့ဆန္ဒများကိုအမိန့် xDD ဖြစ်ကြသည်
ငါလုပ်ရန် post တစ်ခုဖန်တီးပါလိမ့်မယ်: Elementary OS KDE
အကယ်၍ Iceweasel ဖြစ်ပါကကျွန်ုပ်သည်ဒေတာများကို Mozilla xD သို့ပို့ရန်ငြီးငွေ့ပါသည် (မကြာသေးမီကကျွန်ုပ် Debian ကိုအသုံးပြုခဲ့ပြီး Iceweasel ကိုချစ်မြတ်နိုးခဲ့သည်)
ငါ့အမှု၌, Iceweasel ပထမ ဦး ဆုံးမျက်မှောက်၌ချစ်ခြင်းမေတ္တာဖြစ်ခဲ့သည်။ Iceweasel သည်ကျွန်ုပ်အမြဲတမ်းအိပ်မက်မက်ခဲ့သည့် Firefox ဖြစ်သကဲ့သို့ကျွန်ုပ်၏အချက်အလက်နှင့် ပါတ်သက်၍ စိတ်ငြိမ်သက်မှုပေးသည်။
ဖြန့်ချိဌာနခွဲသည် Firefox plugins နှင့်လိုက်လျောညီထွေမှုရှိအောင်များစွာတိုးတက်ခဲ့ပြီးအံ့သြစရာများကိုပြုလုပ်နေသည်။
အကယ်၍ ၎င်းတို့သည်ပြန်လည်သုံးသပ်သော (ကျွန်ုပ်၏) စာမူကိုထုတ်ဝေပါကသင်နှင့်သင်၏ KDE အတွက်အံ့သြစရာဖြစ်လိမ့်မည်
~~ အိုင်ဗင် ^ _ ^
ကောင်းပြီ, ငါ့မူလတန်း KDE beta ကိုနေဆဲဖြစ်သည်။ ယခုအချိန်တွင်၎င်းသည် illustrating အဆင့်တွင်ရှိနေသည်။
ကောင်းသော AMD ပံ့ပိုးမှုရှိသည့် distro တစ်စုံတစ်ယောက်အားကျွန်ုပ်အကြံပေးနိုင်ပါသလား။ ကျွန်ုပ်တွင် HD8470 ပေါင်းစပ်ထားသောကဒ်တစ်ခုရှိပြီး kernel ကို update လုပ်သောအခါ ubuntu 12.04.4 lts ဖြင့်စနစ်မစတင်ပါ။
Manjaro သည် kernel 3.12 ကိုတည်ငြိမ်အောင်လုပ်ပြီး amd အတွက်တိုးတက်မှုဖြစ်စေသည်။ kernel ကိုရိုးရိုး command တစ်ခုဖြင့်ထည့်သွင်းပြီးမည်သည့် kernel ကို boot လုပ်မည်ကိုရွေးချယ်သည်။
kernel သည်အလွန်ဟောင်းလွန်းသည်။ သင်၏ကဒ်အတွက် 13.10 နှင့်အတူ ubuntu 3.11 ကိုသုံးရလိမ့်မည်။
pandev နှင့် jomada တို့၏အချက်အလက်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်
ပြီးတော့ Elementary OS ဟာအသစ်စက်စက်ကွန်ပျူတာအသုံးပြုသူများအတွက်ဖြစ်သင့်သည်မဟုတ်လား။ အတွေ့အကြုံမရှိသေးသောအသုံးပြုသူသည်ထို command အားလုံးကိုအဘယ်ကြောင့် run ရမည်နည်း။
command အနည်းငယ်ရေးရန်မည်မျှခက်ခဲသည်ကိုကျွန်ုပ်မမြင်ပါ။ 😉
ငါဘယ်နေရာမှာမဆိုသူတို့ဟာ Elementary ကိုကွန်ပျူတာအတွေ့အကြုံမရှိသူများလို့ခေါ်ကြတာ၊ ဒီ GNU / Linux လောကရှိလူသစ်များအတွက်ဟုတ်မဟုတ်ဆိုတာကိုငါမသိခဲ့ဘူး။
ဒါပေမယ့်ကွန်ပြူတာအတွေ့အကြုံရှိသူတွေအတွက်တော့ distro ရှိမယ်လို့မထင်ပါဘူး။ ဝေးလွန်းတာမလိုပါဘူး။ မကြာသေးမီကအချို့လူများကသူတို့ page မှာ Ubuntu download ခလုတ်ကိုရှာဖွေရန်မည်မျှခက်ခဲကြောင်းဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ရေးသားခဲ့သည်။
OSX စတိုင်လ်မျက်နှာပြင်မှကျန်ခဲ့သောအတွေ့အကြုံ၌။ ဒါပေမယ့်တကယ်လို့သင်တကယ်ခက်ခဲတဲ့အရာတစ်ခုခုကိုလိုချင်တယ်ဆိုရင်တော့သင့်ရဲ့ distro ကို Linux From Scratch နှင့်တည်ဆောက်ရန်သို့မဟုတ် Gentoo ကိုသုံးရန်သင်ယူဖို့အကြံပြုလိုပါတယ်။
၎င်းသည် Linux နှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်မုန်းတီးသောအတိအကျဖြစ်သည်။ သင်သည်များစွာသောပရိုဂရမ်များတပ်ဆင်ရန်အချိန်ဖြုန်းတီးရမည်။
အဓိကအချက်မှာ ElementaryOS သည်အသုံးပြုရန်အသင့်ဖြစ်နေပြီဖြစ်သည်။ သင်လိုချင်လျှင်နောက်မှလာလိမ့်မည် ...
@elav သင်အတော်လေးမှန်တယ်၊ ဒါပေမယ့်ဘာကြောင့်လူတိုင်းအတွက်အသုံးမ ၀ င်နိုင်ပြီး OS ၏အလေးချိန်ကိုသာတိုးပွားစေမည့်ပရိုဂရမ်များပိုမိုထည့်သွင်းသင့်သနည်း။ မစ္စတာ @pedro မှာ GNU / Linux ကိုစဉ်းစားဖို့မှားယွင်းတဲ့နည်းလမ်းရှိသလား။
ငါ၏အ post ကို elav အပေါ်မှတ်ချက်ပေးရန်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်!
ထိုမုန်းတီးမှုသည်သင်၏အတွေ့အကြုံနည်းမှုနှင့်မသိမှုအပေါ်အခြေခံသည်။ (မုန်းတီးမှုအားလုံးနီးပါးကဲ့သို့) သင်လိုအပ်သမျှနှင့်ကျွန်ုပ်တစ်ခုခုလိုအပ်ပါက openSUSE ကို download လုပ်ပါ။ ၎င်းသည် DVD အပြည့် (၄.၇) ဖြစ်သည်။ သင်ကလုံးဝ install လုပ်ပြီးသင်တစ်ခုခုပျောက်နေသည်ကိုကျွန်ုပ်သံသယရှိသည်။
@Staff Ha ငါအလေးချိန်« 4.7 » GB နည်းနည်းလေးကိုဆိုလိုတာအမှန်ပါပဲ။ xD
Debian DVD1၊ ကျေးဇူးပြု၍
ဒါမှမဟုတ် Debian Wheezy DVD1 ။ ဒီထက်ကောင်းတဲ့အရာ
အကယ်၍ သင်ဟာ After Install ကိုမလိုချင်ဘူးဆိုရင်၊ သင်ဟာ After Install လုပ်ရန်မလိုအပ်သည့် Fedora fork of Russian Fedora Remix ကို install လုပ်ရန်သင့်အားအကြံပေးလိုပါသည်။
Lol, windows ထဲမှာအတူတူပါပဲ, vlc လျှင်, itunes လျှင်, Microsoft Office လျှင်, codecs ဒါနှင့် pascual လျှင်, ထိုဗိုင်းရပ်စ်လျှင် ...
ကံကောင်းတာက linux ထဲမှာ antivirus မလိုပါဘူး
တူညီသည်၊ Linux တွင်အများစုသည် Softonic နှင့် shit အမျိုးအစားများကိုမစစ်ဆေးဘဲ repos သို့ရောက်ပြီးဖြစ်သည်။
ကျွန်တော့်မှာ windows နဲ့ linux တွေရှိရင် xD terminal ကိုကျွန်တော်လက်လွတ်လိုက်တယ်
terminal ထက်ပိုကောင်းတဲ့အရာမရှိပါ Windows command prompt တောင်မှသင့်ရဲ့ခြေဖနောင့်နဲ့မနီးပါဘူး။
Softonic slops များနှင့်တရားဝင် repo အကြား, ငါ repos ဆီသို့ ဦး တည်။
ငါ elementary OS ကိုအချိန်အကြာကြီးသုံးခဲ့ပေမဲ့ charger နဲ့ချိတ်ဆက်ထားတဲ့ laptop ကိုအသုံးပြုတဲ့အခါ၊ မတည်ငြိမ်အောင်နှေးကွေးသွားပြီးဘက်ထရီနည်းနည်းဟောင်းနေပြီးအကောင်းဆုံးစွမ်းဆောင်ရည်ကိုမပေးသောကြောင့်၎င်းနှင့်ပြproblemsနာအချို့ရှိပါတယ်။
Laptop အသစ်ဝယ်ဖို့စဉ်းစားနေတယ်။ ၁၁.၆ လက်မမျက်နှာပြင်နဲ့ i11.6 or i3 ပရိုဆက်ဆာလိုချင်တယ်။ ဘယ်ဟာကိုသင်အကြံပြုသလဲ ???
ဤမေးခွန်းသည်ဆောင်းပါး၏အကြောင်းအရာနှင့်များစွာသက်ဆိုင်မှုမရှိနိုင်သော်လည်းအချို့သတင်းများက Lemote နှင့်ဟာ့ဒ်ဝဲအကြောင်းပြောဆိုသောကြောင့်၎င်းကိုကျွန်ုပ်ပြုလုပ်ရန်ဆုံးဖြတ်လိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။
ဂျူပီတာကို install လုပ်ဖို့ကြိုးစားဖူးလား။ အနည်းဆုံးတော့မင်းရဲ့ Processor က ၁၀၀ ရှိမယ်ဆိုတာသိမှာပေါ့၊ ဒါ့အပြင်ဘက်ထရီကိုချွေတာဖို့၊
ELementary OS သည်ယနေ့အထိကျွန်ုပ်ကြိုက်နှစ်သက်သော distro ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် elemental ဖြင့်သာလာသည်။ ကြည့်ရတာမယုံနိုင်စရာပါ၊ အခြားဂရပ်ဖစ်ပတ် ၀ န်းကျင်တစ်ခုထားရန်လိုအပ်သည်ကိုကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင်မမြင်ပါ။
ငါ elementaryupdate.com ပေါ်တွင်ဖတ်သောအရာကိုထံမှ software ကိုစင်တာကနေတဆင့်အရာအားလုံးနီးပါးလုပ်ခဲ့တယ်, ငါ Windows မှာကဲ့သို့ minimize နှင့်အမြင့်ဆုံးခလုတ်ထားရန်နည်းလမ်းရှာဖွေနေခဲ့သည်ဟူသောအချက်ကို၏အားသာချက်ကိုယူ။
Midori (browser ပါဝင်သည်) သည်တစ်နေ့တာ၏ slop တစ်ခုဖြစ်သည်၊ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်၏ဒေတာအားလုံးကိုတစ်ပြိုင်တည်းချိန်ကိုက်ထားသည့် Chrome ကိုကျွန်ုပ် install လုပ်ခဲ့သည်။ သို့သော်ပို့စ်ကအကြံပြုချက်မပေးပါ။ သင် Firefox အားအကြံပြုချင်သောစိတ်ရင်းမှန်နှင့် ပတ်သက်၍ အကြောင်းပြချက်တစ်ခုခုရှိပါသလား။
အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်၎င်းသည်ဂူဂဲလ်မှဖြစ်ပြီးဂူဂဲလ်ဘာလုပ်နိုင်သည်ကိုသိသောကြောင့်ကျွန်ုပ်သည် Iceweasel ကို ပို၍ ကောင်းသည်
သို့မဟုတ် Chromium (သင်၏ GMail နှင့် log in မလုပ်ဘဲ) Opera သည် GNU / Linux အတွက်၎င်း၏ထောက်ပံ့မှုကိုဖျက်သိမ်းပြီးဖြစ်သည် (လက်ရှိဗားရှင်းကိုပင်ဂွင်းအတွက်မရနိုင်ပါ။ ထို့ကြောင့် Opera 12.16 ကိုသူတို့ GNU / Linux အတွက်ဗားရှင်းအသစ်မထုတ်လုပ်မချင်း Opera Link နှင့်ပါသည်အထိအမှတ်တရလက်ဆောင်ပစ္စည်းအဖြစ်ငါသိမ်းထားသည်) ။
Firefox ကို blink engine ဖြင့်ချိတ်ဆက်ပြီးအခမဲ့ဆော့ဝဲလ်ဖြစ်ပါက! ok ok ငါအရမ်းစိတ်လှုပ်ရှား xD တယ်
ယခုအချိန်တွင်၎င်းနှင့်အနီးစပ်ဆုံးအရာမှာ Qupzilla ဖြစ်သည်၊ သို့သော်ရလဒ်မှာဆိုးဝါးနေကြောင်းကျွန်ုပ်သိမြင်သည်။
ကျွန်ုပ်သည် Chromium / Chrome ထက် Iceweasel နှင့် Firefox ပိုမိုအသုံးပြုသည်။ ပြproblemနာကဂူဂဲလ်တစ်ခုတည်းသာမကဘဲ Debian တွင် Chromium / Chrome ကိုထည့်သွင်းလျှင် HTML5 ဗွီဒီယိုများနှင့်အချို့သော Flash ဗီဒီယိုများကိုကောင်းစွာမမြင်တွေ့ရခြင်းဖြစ်နိုင်သည် (အကယ်၍ သင်အမှားပြင်ဆင်ရန်ပြင်ဆင်မှုကိုမည်သို့ပြင်ဆင်ရမည်ကိုမသိလျှင်) ။
ဒေါက်တာ Byte ဟုသူကပြောသည်
USB Live မှာ Elementary OS ကိုလည်းငါစမ်းသုံးခဲ့ပေမဲ့သူကကြည့်ရတာသိပ်သဘောမပေါက်ခဲ့ဘူး။ ဒါ့အပြင် Pear OS ကိုပိုကောင်းအောင်တပ်ဆင်ထားတယ်၊ ပြီးတော့သူက applications configurations နဲ့ပါတ်သတ်ပြီး၊ နှင့်အခြားသူများသည်ဤခြေလှမ်းများကိုရှောင်ကြဉ်ရန်ငါ Linux Mint ကို install ။
Dr. Byte သို့ပြန်ကြားပါ
Pear OS နှင့် L-Mint တို့ကိုကျွန်ုပ်မနှစ်သက်သောအချက်မှာ၎င်းတို့တွင် Adobe Flash Player တပ်ဆင်ထားခြင်းဖြစ်သည်
Romer ပါ ဟုသူကပြောသည်
ကျွန်ုပ်မှာ Elementar OS ထည့်သွင်းနေတဲ့ပြhaveနာရှိနေပါတယ် မျက်နှာပြင်က pixelated နဲ့တူတယ်။ ကျွန်တော်မရှင်းပြနိုင်ဘူး၊ မျက်နှာပြင်တစ်လျှောက်မှာအဖြူရောင်အစင်းတွေရှိတယ်။ OS ဟာချောချောမွေ့မွေ့နဲ့ကောင်းကောင်းလည်ပတ်နေတယ်၊ ​​ငါရှိနေတဲ့တစ်ခုတည်းသောပြproblemနာက။ မဆိုအကြံပြုချက်?
လူးဝစ် Siller ဟုသူကပြောသည်
မင်္ဂလာပါသူငယ်ချင်း။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ကျေးဇူးပြု၍ ကျွန်ုပ်မေးချင်ပါတယ်။ ဘာကြောင့် OSI ကို install လုပ်တဲ့အခါကျွန်ုပ်မှာ Wi-Fi မရှိတာလဲ၊ သင်တွေ့ပြီလား၊ ကျွန်ုပ်၏ဒရိုင်ဘာသည် Ralink RT3290 802.11bgn Wi-Fi Adapter ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်သည် Linux တွင်လေ့လာသူမဟုတ်ပါ၊ ကျွန်ုပ်သည်နှစ်ပေါင်းများစွာအသုံးပြုခဲ့ပြီးဤဖြန့်ဖြူးမှုကကျွန်ုပ်အားပုံရသည် ကောင်းပြီ၊ ငါပြproblemနာကိုဖြေရှင်းဖို့ကူညီပေးပါလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ စကားမစပ်ဒေါင်းလုပ်လုပ်ယူခြင်းနှင့် usb သည်အဆင်ပြေသည်။ ၎င်းသည် iso အတွက်ပြaနာမဟုတ်ပါ၊ အကြောင်းမှာအခြားကွန်ပျူတာတွင်ငါပြproblemsနာမရှိဘဲ သုံး၍ 32 နှင့် 64 bit နှင့်ပါကြိုးစားခဲ့သည်။
Luis Siller အားပြန်ပြောပါ
Ethernet နှင့်ဆက်သွယ်ထားသော kernel အသစ်ကိုထည့်သွင်းရန်သင်ကြိုးစားခဲ့သလား။
playdeb နှင့် getdeb repositories များသည်တည်ငြိမ်မှုမရှိတော့ပါ။ ယခုစီမံကိန်းသည်ခဏတာမွမ်းမံခြင်းကိုရပ်တန့်ပြီးပြproblemsနာများဖြစ်ပေါ်စေသည်။ မထည့်ပါနဲ့
မင်္ဂလာပါ၊ Elementary OS ကိုကျွန်တော်အရမ်းသဘောကျတယ်။ ဒါပေမယ့်ပြtwoနာနှစ်ခုရှိတယ်။ တစ်ခု၊ alt + click ဖြင့် windows ကိုမရွှေ့နိုင်ပါ။ ကျွန်ုပ်သည်ဤအရာကိုအလွန်အသုံးတည့်ခဲ့သည်။ နှစ်ခု၊ ဘာကြောင့် desktop ပေါ်မှာ icon များနှင့် folder များကိုမထည့်နိုင်သနည်း။ ငါဘယ်လိုလုပ်သလဲ
Excellent က post ကို!
desingblacksystem ပါ ဟုသူကပြောသည်
elementaryosluna desingblacksystem- စနစ် - ထုတ်ကုန် - အမည် tty
ငါငါ့ကို system ကိုဝင်ရောက်ခွင့်ပြုလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ
သငျသညျအကြှနျုပျကို plesse ကူညီခြင်း၏ကြီးမားသောမျက်နှာသာလုပ်ပေးနိုင်ဘူး။
ပထမဆုံး element ကို install လုပ်ခြင်းသည်ပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်ပြီး၊ ကျွန်ုပ် mouse ၏ညာဘက်ခလုတ်ကိုနှိပ်လိုက်သောအခါမည်သည့်အရာမျှမလုပ်ခဲ့ပါ။ ပုံမှန်အားဖြင့်၎င်းသည်ဖိုင်အသစ်၊ ဖိုင်တွဲအသစ်တစ်ခုဖန်တီးရန်ရွေးချယ်စရာများပေးသည်၊
အဲ့ဒီ function တွေကိုပေးဖို့မင်းဘာလုပ်လို့ရလဲမသိဘူးဒါပေမယ့်သူက hehe button ကိုဖြုန်းတီးသလိုမျိုးပေါ့
သင့်၏စိုးရိမ်ပူပန်မှုသည်ကျွန်ုပ်အတွက်လည်းဖြစ်သည်။ Pantheon ကိုယ်တိုင်တွင် desktop ကိုဖွင့်ရန်မဖြစ်နိုင်ပါ။ အနည်းဆုံးရက်ပေါင်းတစ်ခုခုရှာဖွေပြီးနောက်ထိုနိဂုံးကိုကျွန်ုပ်ရောက်ရှိခဲ့သည်။ ငါဒီမှာထွက်အလားအလာလမ်းတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ http://www.hongkiat.com/blog/elementary-os-luna-tips/
Desktop ကိုစီမံခန့်ခွဲရန် Nautilus ကိုအတူတကွလည်ပတ်ခြင်းထက်ပိုသည်။ ၎င်းသည်အပြည့်အ ၀ တူပုံမပေါက်လျှင်ပင်မူလဆောင်ပုဒ်ကိုသင်ထည့်နိုင်သည်။
သင်ပိုကောင်းသောအရာတစ်ခုခုကိုသင်သိပါကမှတ်ချက်ပေးပါ။ အဆိုပါ distro ကောင်းလှ၏ကြောင့်ဘက်မှာရှုံးတဲ့အရှက်ကွဲခြင်းဖြစ်သည်။
အဖြေအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်၏ lap tube ၏ hardware အကြောင်းကြောင့် xubuntu ကိုကျွန်တော်ဖယ်ထုတ်ပြီး install လုပ်ရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် eOS ကိုအပ်နှံတဲ့ pc တစ်ခုရဖို့ကျွန်တော်အလေးအနက်စဉ်းစားပါတယ်။
eOS နဲ့လိုက်ဖက်တဲ့အမှတ်တံဆိပ်၊ လက်တော့ပ်မော်ဒယ်တစ်စုံတစ်ယောက်က Luna ကို Lenovo နဲ့ပြသတဲ့တရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက်မှာအကြံပေးနိုင်ပါသလား။ ဗီဒီယိုပြတ်တောက်ခြင်း၊ အရည်ပျော်ခြင်း၊ စွမ်းဆောင်နိုင်ခြင်းမရှိဘဲအခြားလိုက်ဖက်တဲ့အမှတ်တံဆိပ်ရှိပါသလား။
Lenovo သည်ယေဘုယျအားဖြင့်စျေးနှုန်းမြင့်မားပြီး eOs များနှင့်တန်းတူသို့မဟုတ်ပိုမိုကောင်းမွန်သောအခြားအမှတ်တံဆိပ်တစ်ခုရှိပါကကျွန်ုပ်သိလိုသည်။
ငါမှာ Hp g42 amd dual-core ရှိတယ်ဒါပေမယ့်အသုံးပြုရတာကြောင့်ဟောင်းတယ်။ အရမ်းပူလာတယ်။ ဒါ့အပြင် eOS hotcorners တွေသုံးတဲ့အခါမှာအမှားတွေအပြင်ပြတင်းပေါက်အသေးတွေလည်းမှုန်ဝါးနေတယ်။ ဒါကြောင့်အသစ်တစ်ခုဝယ်မယ်။
သူငယ်ချင်း။ ငါ elementary os luna ကို install လုပ်ပြီးပြီ။ ဒါပေမယ့်ပြtheနာကအရမ်းနှေးလွန်းလို့ပါ။ ကျွန်ုပ်ဘာမှမပျောက်သေးကြောင်းကျွန်ုပ်မည်သို့စစ်ဆေးနိုင်ကြောင်းကျွန်ုပ်အတွက်ထူးဆန်းနေပုံရပါသည်။ ကျွန်ုပ်သည် Linux ကိုပထမဆုံး install လုပ်ခြင်းဖြစ်သည်။
မင်္ဂလာပါ ကျွန်ုပ်မကြာသေးမီကကျွန်ုပ်၏မှတ်စုတွင် EOS ကို install လုပ်ပြီးကျွန်ုပ်တွင်ပြhaveနာတစ်ခုရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တွင် hdmi ဆက်သွယ်ထားသော Samsung TV တစ်ခုရှိပြီး၎င်းကိုမှတ်မိသည်။ သို့သော် TV ကသူက "သူကအချက်ပြမှုကိုမခံယူဘူး" ဆိုတဲ့စာတစ်စောင်ကိုပြနေတယ်။ တစ်ယောက်ယောက်မှဖြစ်ပျက်ခဲ့သလား။
မင်္ဂလာပါ၊ ယနေ့ကျွန်ုပ် Elementary OS ကိုသာ install လုပ်ပြီးအောက်ပါမေးခွန်းကိုမေးပါပြီ -
ငါမော်နီတာနှစ်ခု (HDMI နှင့် VGA) ကိုအသုံးပြုသည်။ ပြpasswordနာမှာကျွန်ုပ်၏စကားဝှက်ကိုထည့်သွင်းပြီး Enter ကိုနှိပ်ပြီးနောက်ဖန်သားပြင်တစ်ခုသည်အနက်ရောင်နှင့်နောက်တစ်ခုမှာအဖြူရောင်ဖြစ်သည်။
ငါ ASUS RADEON HD 6570 ဂရပ်ဖစ်ကဒ်ကိုသုံးသည်။
Federico Pereyra ဟုသူကပြောသည်
ငါ mp3 မဖွင့်နိုင်, သင်ပြောခဲ့သည်အတိုင်းငါကလိုအပ်သော GStreamer connector ကို install လုပ်မထားပါ "ငါ့ကိုမက်ဆေ့ခ်ျကိုပစ်ချ, ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် system ကိုယခု update လုပ်လျက်ရှိသည်, ဒါပေမယ့်သူကအခြားအရာတစ်ခုခုဖြစ်လျှင်, ငါသည်သင်တို့ကိုမေးခွန်းထုတ်, အလွန်ကောင်းသော သတင်းအချက်အလက်, အလွန်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
Federico Pereyra အားပြန်ပြောပါ
ငါ ELEMENATARY OS နဲ့သင်အကြံပြုတဲ့ package တွေအားလုံးကိုပဲ install လုပ်ခဲ့တယ်။ ငါ Linux အတွက်အသစ်အဆန်းဖြစ်နေပြီဆိုတော့ခင်ဗျားကိုမေးပါမယ်။
Desktop ပေါ်တွင် applications များ၊ ဖိုင်တွဲများ၊ ဖိုင်များစသည်တို့ကိုမည်သို့ထည့်ရမည်နည်း။ ကျွန်တော့်ကိုသင်္ဘောကျင်းမှာထားခဲ့တာပဲ
ဤမျှလောက်များစွာသောရိုက်နှက်မှုများပြီးနောက်သင်သည်ဤမျှလောက်ခရီးသွားခြင်းအတွက်ဆုတစ်ခုအနေဖြင့် ၁၅ ဆယ့်တစ်ဂါလံကိုနှိပ်ပါ။
ကျွန်ုပ်၏ HP လက်ပ်တော့ပ် OS မှ WIFI ကွန်ယက်ကဒ်ကိုမတွေ့နိုင်သည့်ပြproblemနာကိုမည်သို့ဖြေရှင်းရမည်နည်း၊ အဆက်ပြတ်နေပုံရသည်။ ထည့်သွင်းရန် codec ဘာလဲ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
Federico Gustavoo Pereyra ဟုသူကပြောသည်
ဖြစ်နိုင်သည့်အဖြေမှာ pc ကို internet နှင့် Ethernet မှတဆင့် ဆက်သွယ်၍ driver များကို update လုပ်ပေးလိမ့်မည်။ ထို့ကြောင့် wifi board ပေါ်ရှိသူများကိုအလိုအလျောက်တပ်ဆင်လိမ့်မည်။ ၎င်းကိုအလုပ်မလုပ်ပါကအခြားအဖြေတစ်ခုကိုရှာနိုင်သည်။ မင်္ဂလာပါ
Federico Gustavoo Pereyra အားပြန်ပြောပါ
ချန်ပီယံ Ortiz ဟုသူကပြောသည်
eOS ကို update တိုင်းတိုင်းမှာတူညီတဲ့ပြသနာရှိတယ်။ usb မှတစ်ဆင့် wi-fi adapter ထည့်သွင်းခြင်း / ထည့်ခြင်းကိုအတန်အသင့်ဖြေရှင်းပြီးပါပြီ။ ထို့နောက်စနစ်၏ ဦး စားပေးမှုများတွင်ကျွန်ုပ်သည်အပိုဆောင်း Drivers ၏အိုင်ကွန်ကိုရှာပြီး၎င်းတို့ကိုရှာဖွေပြီး၎င်းကိုသက်ဝင်လှုပ်ရှားစေပါ။ ဒီအတွက်အင်တာနက်ဆက်သွယ်မှုလိုအပ်တယ်၊ ကျွန်ုပ်မှာ Ethernet မရှိဘူး၊ ဒါကြောင့်ပြင်ပ adapter ကိုသုံးတယ်။ တခါတလေမှာဆက်သွယ်မှုပြproblemsနာတွေရှိပေမယ့်အဲဒီနောက်မှာငါဆက်သွယ်နိုင်တယ်။ ကျွန်တော့်ကဒ်က Broadcom ပါ။ eOS ဟာစနစ်ကောင်းတစ်ခုပါ။ Pear OS x ကိုမသုံးမီနှင့်၎င်းတွင်ပြproblemsနာများစွာရှိကြောင်းသတိပြုမိသည်။ ကျွန်ုပ်သည်ကျွမ်းကျင်သူမဟုတ်သော်လည်း terminal ကိုအသုံးမပြုဘဲအရာများကိုဖြေရှင်းရန်ကြိုးစားသည်။ ကျွန်ုပ်သည် netbook ကိုအင်တာနက်ဆာဗာတစ်ခုအနေနှင့် အသုံးပြု၍ open source system များကိုစမ်းသပ်သည်။http://clavius.tij.uia.mx) Ubuntu နှင့်ငါမနှစ်သက်သော eOS များ၏အရသာအားလုံးနီးပါးကိုငါ install လုပ်ပြီးဖြစ်သည်။ ယခုဤ distro နှင့်အဆင်ပြေပါသည်။
Adalid Ortiz မှစာပြန်ရန်
မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ ခင်ဗျားရဲ့ထည့် ၀ င်မှုအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ငါ Windows ကနေခဏတစ်ဖြုတ်ပြောင်းရွှေ့ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ ကျွန်ုပ်၏ wifi ဆက်သွယ်မှုသည်အဆက်မပြတ်ပြတ်တောက်ပြီး၎င်းသည်အလွန်စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စရာ မှလွဲ၍ အရာရာတိုင်းအဆင်ပြေပါသည်။ ကျေးဇူးပြုပြီးဒီကိုပြင်ပါ ပထမ ဦး စွာကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ငါ့မှာ Acer V5 လက်ပ်တော့ပ်ရှိတယ်။ Intel Core i3
Wifi အင်တာနာအတွက်ယာဉ်မောင်းများကိုကျွန်ုပ်မည်သို့တပ်ဆင်ရမည်နည်း။ ကျွန်တော်အင်တာနက်ချိတ်လို့မရပါဘူး
မင်္ဂလာပါ၊ ဂျယ်လီကဲ့သို့သော ၀ င်းဒိုးများကိုထားရန်ကြိုးစားနေသည်။ အသုံးပြုသူ၏ settings ကို xfce mode တွင်မတွေ့ပါ။ သင် settings သို့သွားသည်။ သို့သော်မည်သည့်နေရာတွင်မျှမတွေ့ပါ။
ဟိုင်း။ ကောင်းပြီ။ ဒါပေမယ့်ငါဂျယ်လီပြတင်းပေါက်တွေနဲ့ပြhavingနာရှိနေတယ်။ Session နဲ့ starup ဆိုတဲ့ menu ကိုငါရှာမတွေ့ဘူး။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သင် configuration ကိုသွားတဲ့အခါဘယ်ကိုသွားရမှန်းမသိဘူး။ ငါ့ကိုကူညီနိုင်မလား။
မင်္ဂလာပါ၊ အချက်တော်တော်များများ၊ မူလတန်းစာသားကငါ့ကိုအဲဒီမှာမရှိဘူး၊ ငါ့ကို install လုပ်ခွင့်မပြုဘူးလို့ပြောတယ်။ Session နှင့်သုံးစွဲသူအားမည်သို့ ၀ င်ရောက်နိုင်သည်ဆိုသည့်မေးခွန်းလည်းရှိသည်။ ယေဘူယျပြင်ဆင်မှုသည်ကျွန်ုပ်အတွက်အလုပ်မလုပ်သောကြောင့်ကျွန်ုပ်သည်တစ်ခုခုလုပ်ရန်သို့မဟုတ်တပ်ဆင်ရန်လိုအပ်ပါသလား။
ကောင်းပြီ၊ ပို့စ်တင်တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်ငါကမူလတန်းကိုသိပ်မသိခဲ့ဘူး။ Linux အကြောင်းသိပ်မသိဘူး။ ဒီ post ကိုကြည့်တဲ့သူတစ်ယောက်ကငါ့ကို operating system နဲ့ပတ်သက်ပြီးပိုပြီးနားလည်အောင်ကူညီပေးချင်ရင်ငါလိုချင်ပါတယ်။ သင်ခန်းစာတစ်ခုဒါမှမဟုတ်တစ်ခုခုအရမ်းတန်ဖိုးထားရလိမ့်မယ်။
ငါသည်ဤ OS ကိုခစျြ, ဒီ input ကိုများအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ တစ်ခုခုကိုအပြီးသတ် install လုပ်သည်နှင့်အမျှကျွမ်းကျင်သူထောက်ခံချက်များရရန်ကောင်းသည်။ ရွှင်လန်း!
Luis Villalobos ဟုသူကပြောသည်
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်သည် Elementary OS ကိုဆက်လက်အသုံးပြုလိုသည်။ အင်တာနက်ချိတ်ဆက်စရာမလိုဘဲ application များကိုတပ်ဆင်နိုင်သရွေ့တစ်စုံတစ် ဦး ကဤအလုပ်ကိုမည်သို့လုပ်ရမည်ကိုပြောနိုင်ပါသလား။
Luis Villalobos အားပြန်ပြောပါ
Firefox OS 1.1: အသေးစိတ်နှင့်အနာဂတ်
Ubuntu 13.10 Saucy Salamander ကိုဘယ်လို Install လုပ်ရမလဲ